လမ်း ဘေး နေ လမ်း ဘေး စား – Hlataw.com
အပြင်း စား ဇာတ်လမ်း တို) ကိုယ့်စိတ် ကို မထိန်းနိုင်သူများမဖတ်ရ၊ ဖတ် ပီး ထု မိ ၍ အားကုန်ပါက အငယ်ကောင်နှင့် လားလားမျှမဆိုင်ပါကြောင်း ချိတ်ချိတ်ချင်းမို့ချိတ်မိတာ၊ အမှိုက်ရှိလို့ခွေးချီးလာသလို အသွင်တူလို့ပေါင်းမိထားတဲ့ ငထူးနဲ့ငတိုး။ နာမည်ကသာ ငထူး လူက ဘားးမှမထူး။ ငတိုးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း သူခိုးသာသာ။ ခိုးဆိုးလုနှိုက် လမ်းဘေးနေလမ်းဘေးစားတွေ။ အမိမရှိ အဖမရှိ လူမှန်းမသိခင်ကလည်းလမ်းဘေးမှာ၊ လူမှန်းသိတော့လည်းလမ်းဘေးမှာ ဟုတ်နေရောဗျာ။
လူပုံစံတွေက ဘိန်းစားဆေးငတ် ဆေးပြတ်တဲ့ရုပ်၊ နံ ရိုးပတ္တလားနဲ့ ခြေသလုံးပုလွေရိုး။ စားသမျှအားနဲ့အသားက လီးမှာများလာစုသလားပဲ။ လူတော်တော် လီးကြီးကြီး။ “မင်းလီးပြစမ်း” ငထူးကမေးတာ “ဒီမှာ. ဒါတောင် မတောင်သေးဘူးနော်” ပုဆိုးလှမ်ပြရင်း ငတိုးကပြောတယ်။ လမွှေး မဲမဲရှည်ရှည်များ ထူပိန်းစွာဖုံးထားတဲ့ ၇လက်မ ဝန်ကျင်လီးကြီးက ပျော့တွဲတွဲ လဥ၂လုံးကြားမှာ အိပ်စက်နေလျက်။ ငထူးက ပုဆိုးထဲ လက်သွင်းဆွရင်း “ငါ့လီးလည်း မင်းလောက်ရှိမယ်ကွ” “ပြစမ်း. ဟာ မင်းလီးက လီးမဲကြီးပဲ” အဟုတ် ငထူးက အသာညိုပေမယ့် လီးနဲ့လဥက ကပ္ပလီလီးကြီးလို ညိုညိုမဲမဲ ၆လက်မကျော်ဝန်းကျင်။ တောင်နေတဲ့ အချိန်တွေဆို မဲပြောင်တင်းထောင်ပီး ချောကလက်ရေခဲချောင်းကြီးလိုပဲ။
သုဓမ္မာဇရပ်တန်း အနောက်က သူတို့နေရာ ယာယီစံနန်းထဲမှာ တစ်ယောက်လီး တစ်ယောက် ပြရင်း ဏှာထနေတဲ့ သကောင့်သား၂ကောင်။ ဏှာထဆို သိတဲ့အတိုင်း သူတောင်းစားဗိုက်ဝရင်လီးတောင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံကလည်းရှိတယ်မလား။ မနေ့ညက ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲမှာ နှိုက်ခဲ့တဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်ငွေက ၂ယောက်ပေါင်း ၂သိန်းခွဲလောက်ရခဲ့တာဆိုတော့ နေကုန် သောက်စားမူးရူး.. မူးလို့ဝတော့ ဘူးကြောဆွဲကြတဲ့သဘော။ “ဒီညရော နှိုက်ဦးမလား” “အနှိုက်သီးသန့်တော့ မလုပ်ဘူးကွာ ကြုံရင်နှိုက်မယ်၊ မကြုံရင် ပွဲကြည့်မယ်၊ ခုပိုက်ဆံက ငါတို့ ၁ပတ်လောက် အသာလေး သုံးလို့ရပါတယ်” “၁ပတ်တောင် ကချင်မှကမယ် သုံးတက်ရင် ၂ပတ်လောက်ထိ အငြိမ်ကွ” ၂ဦးသဘောတူ ဒီညတော့ ဆက်ရက်မင်းစည်းဇိမ်ခံစားကြတော့မယ်။
၂ကောင်လုံးကလည်း မူးလာပီဆို ခွေးမတောင်အလွှတ်ပေးချင်တာမဟုတ်။ အလကားရတဲ့ စည်းဇိမ်ဆိုလို့ ဒါတစ်ခုပဲရှိတာမဟုတ်လား။ အခြေမရှိအနေမရှိအဆင့်တွေမို့ ဘဝတူချင်းကတောင် အပေါင်းအဖက်မလုပ်ချင်ကြတော့ ညတိုင်းဂွင်းတိုက်၊ အချောင်ရရင် သံလမ်းဘေးက အရူးမတောင် ပါးစပ်အဝတ်စို့ လိုးကြတာဗျို့။ အဲ့လောက်ကို ထန်တာ။ ၈နာရီလောက် ဘုံဆိုင်မှာ အရက်ဖြူသောက်လေကြောရှည်။ “ဖာခေါ်ချချင်တယ်ကွာ” ငတိုးကပြောတာ “လီးးးဖာခေါ်ချပါလား မမှတ်သေးဘူးလား” ငထူးကပြန်ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဟို အရင်လတုန်းက နန်းရှေ့က လင်မယား၂ယောက်အိမ် ဝင်ခိုးကြတယ်။
ရွှေထည် ပစ္စည်းတော်တော်များရခဲ့ပီး ဈေးချိုမှာ သူခိုးဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းတာတောင် ၅သိန်းကျော်ရခဲ့တော့ ဖာတစ်ပွေ ခေါ်လိုးတာ တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ၂ယောက်လုံး ဂနိုကျလို့ ဆေးကုခဲ့ရပါသေးကောလား။ ဖြစ်ပုံကဒီလို… “ဟျောင့် ငတိုး ငါလမ်းကြောတစ်ခုတွေ့ထားတယ် နန်းရှေ့က အိမ်တစ်အိမ်ကွ” “ဟေ ဟုတ်လား၊ ခိုင်လား? ခိုင်မှလုပ်နော် တော်ကြာဟိုတခါ စက်မှုထဲကအိမ်လို ခိုင်တယ်ဆိုပီး ဝင်ခိုးတာ ဘားးမှမရှိလို့ ပြန်ထွက်လာရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံနေမယ်” “ဟာ စိတ်ချ ဒီတစ်ခါတော့မလွဲဘူး၊ သူတို့ လင်မယားက မနက်ကမှ မင်္ဂလာဆောင်ထားတာ၊ ကံကောင်းရင် ဇာတ်ကားတောင်ကြည့်ချင်ကြည့်ရမှာ ဟီး” စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ငတိုးက ပြန်ဖြေတယ်။ ညလူခြေတိတ်ချိန် အမှောင်ရိပ်ကို အားကိုးရင်း ငထူးငတိုး သူခိုး၂ယောက် အသစ်စက်စက် လင်မယားအိမ်ကို စတင် ချည်းနှီးဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပီ။ ခြံဝန်းကိုကျော် ၂ထပ်တိုက် အနောက်ဖက် မီးဖိုဆောင်ဘက်က တံခါးကို လွှနဲ့တိုက် သံပန်းကို ပိုက်ကိုက်နဲ့ဖြတ် သိပ်အချိန်မပေးလိုက်ရ၊ ၅မိနစ်စွန်းလောက်မှာပဲ ၂ယောက်သား အိမ်မကြီးထဲ အလွတ်အကျွတ်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပီ။
အောက်ထပ်က ကျွန်းဗီဒိုကြီးကို အသင့်ပါလာတဲ့ သော့တုနဲ့ဖွင့်လိုက်တော့ အားပါးးပါးးး အနီရောင်ဗူးလေး၇ဗူးက အကြီးအသေးအစီအရီ။ အထဲမှာတော့ ဆွဲကြိုး လက်စွတ် လက်ကောက် နားကတ် ရွှေထည်ပစ္စည်းအမျိုးစုံ ပွပေါက်။ “လာ သွားမယ်” ငထူးက ပြန်မယ်လုပ်တော့ “နေဦး.. နားထောင်” အပေါ်ထပ်မှ အသံ “ဖုတ် ဖုတ် ဖက် ဖက်” “အင့် အင့် အ အ. အား အားး” ပွဲကြမ်းနေတဲ့အသံ။ ဘယ်နှချီမြှောက်လည်းတော့မသိ၊ အချိန်ကတော့ ၁နာရီကျော် ၂နာရီဝန်းကျင်။ “သွားကြည့်ချင်တယ်ကွာ” “ငါလိုးးး မိသွားမှ သေမယ် လာသွားမယ်” “ဟာ ခဏပါကွ မကြာဘူး”။